KUTIZA MUMVURI WAKO — Stella Chiweshe
Kufukatira vaDzimu, uchino hwanda kuchechi kkana kubhawa, kupisa mafuko evaDzimu
zvakango fanana nekutiza mumvuri wako. Mwana kana asinga kuteerere uchimuudza zvino mubatsira unonzwa sei? Pafunge kana mwana avakuku ramba achitiza mumba achienda kunogara kumwe, kuri kutiza zvauno muraira zvichazo mubatsira mune ramagwana rake,
unonzwa sei? Mubereki ndiye mumvuri wekuvanda nawo kana wanetseka.
Ndakaona kuri kufurirwa kwatakaitwa kokonzera isu vanhu kutaika njere. Makore zana kubvira 1880 kusvika 1980 vanhu vachi dziidziswa kunzi chivanhu chenyu ndezve mweya yakaipa haasi mashoma. Imbwa chaiyo ukai dziidzisa zvaunoda kwemwedzi miviri kana mitatu inopedzisira yava kuzviita zvaunoda, tsinza ndiye munhu kudzii dziswa kwe zana remakore.
Zvizvarwa nezvi zvarwa kubvira makore zana iwayo vachiudzwa zvaka pesana nehunhu
hwavo, vano pedzisira variivo pachezvavo vanhu vanenge voto dzizdzisawo vana vavo izvozvo. Sezve vamwe vedu vave kuti havabate magwenzi ehutano handiti here zvaka tangira mukuti vanhu vairapa nemagwenzi vainge vachi piswa. Ndipoka pakabva vanhu vazvikanda pasi kwava kuto vamba masangano anoti isu hatiite izvozvo.
Asi magwenzi ehutano achifanira kugara akadyiwa sezvakaita muruma nyama, muguruzuzu vamwe vachiuti ndorani, iwo mubvamaropa kanjani kurapa kwaunoita muviri kana munhu usinganzwe zvakanaka. Handiti here miti nekuti iyo inogara muvhu saka isu kuti tibatane nesimba revhu kudya miti.
Zvino ini pandakaona kuti haisi mhosva yedu isu vanhu, zvakato konzerwa nekufamba pasi rese ndichiona kuti chivanhu ndechimwecho. Nokudaro ndaka vamba sangano rinonzi Chivanhu. Kuti tirai ridzane patakarasika, tichi udzana tsika dzedu patiri kudzipotsa tichiita sepo tiri pamwechete kuisa pfungwa dzedu panzvimbo imwechete. Chatisinga zive kuti chaifambiswa sei tichibvunzawo vakuru vapenyu vachiri machiri Chivanhu, naivo vasisina miviri vanotaura vagere pavapenyu kuti tichizive Chivanhu chedu namazvo.
Tinoda kuti tizviitire neva chazoveko tese tisisiko variko nhasi, kwete kuti tisiye sezvazviri kudai. Tsumo inonzi kare haagare ari kare, ngaishande pekuti timise hwaro hwehunhu hwedu tichisiya zvekare zvataka dziidziswa nevasina kusiya hwavo hunu. Unozviziva here kuti vanhu vanoenda kunopikira hufundisi vanopihwa gwenzi, randinotoziva nezita rekuti vakanwa vano kanganwa kwavakabva?
Vanonwisa vachinzi imvura yaka ropafadzwa, nekuti gwenzi iroro inenge ichingove semvurawo zvayo, hazvi nzwike pakunwa kuti mune chinhu. Ko zvavano pfungaidzira vanhu muma kereke unoti chii iwewe? Handiti here igwenzi iroro? Zvinoka kana razoiswa muchinhu chino penya kudaro unongoti ndezve chirungu zvaMwari. Kana kumbo mubvunza kuti konhai baba, chamunopisa chii, hazvi bvunzwe. Koiyo inonzi waini yaanonwa iya asati atanga kuparidza, hausi kuona kuti anotombo tanga ambonzi nekadzungu vhee here kutanda nyadzi here iwewe, kuti atange kuparidzira iwe zvaasina kuona. Haikona kuramba uchinzarwo kani.
Isu kwedu kunamata kwekusvitsa nhau nekuvakuru vedu kuti vatisvitsire kuna Musikavanhu chii chakaipa kwazviri? Chivanhu hachitadzise munhu kuenda kuchechi nekuti unenge uchitanga wakudza amai kureva ivhu, wozokudzaka baba vedu Musiki. Haikona kuramba uchinyeberwa iwewe tarisa uone kuti zviri kugadzirisa chii ipo pasi amai vedu zvavarwara kudai kundengendeka. Ndomboisiira ipapo.
Kana iwe mudiki kwandiri, nemivakuru vangu muchidawo kuti tikuru-kure nezve Chivanhu munoenda pa 'Contact' mondinyorera topindurana. Ndingoriwo zvangu gwenyambira, zvoga.